क्राइष्ट, कानूनको अन्त्य, विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
जहिले पनि म प्रेरित पावलका पत्रहरू पढ्छु, म यो देख्छु कि उनले येशूको जन्म, जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान र स्वर्गारोहणको माध्यमबाट परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्ने सत्यता उनले साहसपूर्वक घोषणा गरे। अरू धेरै पत्रहरूमा पावलले ती व्यक्तिहरू परमेश्वरमा पुन: मेलमिलाप गर्नमा धेरै समय बिताए जसले येशूमाथि विश्वास गर्न सक्दैन किनभने तिनीहरूको आशा व्यवस्थामा आधारित थियो। यो याद राख्नु महत्वपूर्ण छ कि परमेश्वरले इस्राएललाई दिनु भएको कानून अस्थायी थियो। यो केवल अस्थायी हुनको लागि थियो र ख्रीष्ट नआउन्जेल मात्र प्रभावकारी रहनु पर्छ।
इस्रायलका निम्ति व्यवस्था एक शिक्षक थियो जसले पाप र न्याय र मुक्तिदाताको आवश्यकताको बारेमा तिनीहरूलाई सिकाउँथ्यो। यो तिनीहरूलाई प्रतिज्ञा गरिएको मसीह नआउन्जेलसम्म डो led्यायो, जसमार्फत परमेश्वरले सबै जातिका मानिसहरूलाई आशिष्‌ दिनुहुनेछ। तर व्यवस्थाले इस्राएललाई न्याय वा मुक्ति दिन सक्दैन। यसले केवल तिनीहरू दोषी थिए भनेर मात्र भन्न सक्थ्यो, कि उनीहरूलाई उद्धारकर्ता चाहिन्छ।
क्रिश्चियन चर्चका लागि व्यवस्था नै पुरानो नियम जस्तै हामीलाई परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर सिकाउँछ। यसले हामीलाई यो पनि सिकाउँदछ कि परमेश्वरले कसरी एउटा मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो जसबाट मुक्तिदाताले तिनीहरूका पापहरू हटाउन आउँथे - केवल परमेश्वरका जनहरू इस्राएलबाट मात्र होइन तर सारा संसारका पापहरू पनि।
परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई प्रतिस्थापनको रूपमा कहिले पनि कानूनको अभिप्राय थिएन, तर इस्राएललाई आफ्नो उद्धारकको लागि डो lead्याउने माध्यमको रूपमा। गलाती 3,19: १ In मा पावलले लेखे: “त्यसोभए व्यवस्था के हो? यो पापको लागि थपेको थियो जबसम्म प्रतिज्ञा गरिएको सन्तान हुँदैन।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, परमेश्वरसँग व्यवस्थाको सुरूवात र अन्त हुने विन्दु थियो र अन्तिम बुँदा भनेको मसीह र उद्धारक येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थान थियो।
२१ पद २१-२21 मा पावलले अझै यसो भने: “कसरी? त्यसोभए के त्यो व्यवस्था परमेश्वरको प्रतिज्ञाको विरुद्ध हो? त्यो धेरै टाढा छ! किनकि यदि त्यहाँ जीवन थियो भने मात्र त्यस्तो जीवन व्यवस्था ल्याउनेथियो। तर धर्मशास्त्रले सबै कुरा पापको अधीनमा राखेको छ ताकि येशू ख्रीष्टमा विश्वास राख्ने प्रतिज्ञा विश्वास गर्नेहरूलाई दिइनेछ। तर विश्वास आउनु भन्दा अघि हामीलाई व्यवस्थाको अधीनमा राखिएको थियो र हामीमा विश्वास आउनेवाला थियो। त्यसोभए व्यवस्था हाम्रो लागि ख्रीष्टको अनुशासनको रूपमा रहेको छ ताकि हामी विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन सकौं। तर विश्वास आएपछि हामी अब अनुशासनको अधीनमा छैनौं। किनकि तपाईंहरू सबै जना ईश्वरको विश्वासमा येशू ख्रीष्टका सन्तान हुनुहुन्छ। "
परमेश्वरले यो समझको लागि आफ्नो आँखा खोल्नु अघि, पावलले व्यवस्था कहाँ रहेको थियो देखेका थिएनन् - मायालु, दयालु र क्षमाशील परमेश्वरलाई तिर, जसले व्यवस्थाले प्रकट गरेका पापहरूबाट हामीलाई छुटकारा दिन सक्छ। यसको सट्टा, उनले व्यवस्था आफैंलाई अन्त्यको रूपमा देखे, र एउटा कठोर, खाली र विनाशकारी धर्मको अन्त्य भयो।
"र यसैले यो आज्ञा पाए कि मृत्युले मलाई जीवन दियो कि अझै भेटियो," उनले रोमी :7,10:१० मा लेखे, र पद २ 24 मा उनले यो प्रश्न सोधे: "म जे दु: खी मानिस हुँ! यस नश्वर शरीरबाट मलाई कसले छुटाउनेछ? ”उनले जवाफ पाए कि मुक्ति भनेको परमेश्वरको अनुग्रहले मात्र आउँदछ र येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर मात्र यो अनुभव गर्न सकिन्छ।
यी सबैमा हामी देख्छौं कि न्यायको बाटो कानूनको माध्यमबाट होइन, जसले हाम्रो अपराध हटाउन सक्दैन। धार्मिकताका लागि एक मात्र मार्ग येशूमा विश्वास गर्नु हो, जसमा हाम्रा सबै पापहरू क्षमा भएका छन् र हामी हाम्रो विश्वासी परमेश्वरसँग मिलापमा छौं जसले हामीलाई बिना शर्त प्रेम गर्नुहुन्छ र हामीलाई कहिल्यै जान दिनुहुन्न।